Delegem-paritry ny Jovenna eto Boeny: lasa nisotro ronono | Région Boeny
Lanonana tsotra fanaovana veloma ho amin’ny fisotroan-drononon’ny delegem-paritry ny orin’asa Jovenna Madagasikara eto Boeny no notanterahina ny talata 20 jiona 2017 teny amin’ny Espace Doha Amborovy Mahajanga.
Iraika ambin’ny folo-taona no niasa teo anivon’ny Jovenna Madagasikara Atoa Razakatiana Anthony ka fito taona teto Mahajanga, raha tany amin’ny sampana Fianarantsoa izy teo aloha.
Nisahana ireo tobin-tsolika Jovenna efatra eto amin’ny faritra Boeny ny tenany dia ny 02 eto Mahajanga , ny 01 any Ambondromamy, ary ny 01 ao Ankazomborona.
Nankasitra ny fiaraha-miasa matotra tamin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky sy ireo tompon’andraikitra ara-panjakana sy tsy miankina teto amin’ny faritra Boeny Atoa Razakatiana Anthony.
Tsy nanana olana ny Jovenna Madagasikara nandritra izay 11 taona niasany izay na teto Mahajanga na tany Fianarantsoa hoy kosa fankasitrahana natolotry ny Talen’ny Mpiasan’ny Jovenna eto Madagasikara azy, izay nisolotena ny Tale jeneraly.
Tovolahy mbola erotrerony indray kosa, no handimby azy hitantana indray ireo toby Jovenna eto Boeny, dia Atoa Ramefy, izay efa folo taona niasana teto amin’ny Jovenna Mahajanga ihany ary efa manana traikefa eo amin’ny sehatry ny solika.
Nirary soa ny lasa nisotro ronono ary nanome fankaherezana sy nampanantena fiaraha-miasa ny vaovao ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffa, izay tonga nanatrika ity lanonana ity.